WAR DEG DEG: Ciidamada DF Somaliya oo toogtay haweenay Saldhig isku qarxin rabtay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta WAR DEG DEG: Ciidamada DF Somaliya oo toogtay haweenay Saldhig isku qarxin...
WAR DEG DEG: Ciidamada DF Somaliya oo toogtay haweenay Saldhig isku qarxin rabtay
Muqdisho (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya, degmada Baardheere ee gobolka Gedo, ayaa sheegaya, in ciidamada dowladda Federalka Soomaaliya ay halkaasi ku toogteen haweenay waxyaabaha Qarxa ay ku xirnaayeen.
Sida ay baahisay warbaahinta dowladda, haweenaydaan ayaa doonaysay inay isku qarxiso Saldhiga Ciidamada dowladda ee Degmada Baardheere.
Haweenaydaan ayaa la sheegay inay ka soo dagtay gaari caasi ah oo dhanka Magaalada Baydhabo ka yimid, waxaana intaasi kadib ay bam gacmeed ku tuurtay Saldhiga Ciidanka ay joogaan, iyadoo halkaasi ay ku dhaawacmeen laba ka mid ah Ciidamadii Saldhiga joogay.
Ciidankii kale ee joogay Saldhiga ayaa la sheegay inay rasaas la dhaceen haweenaydaasi oo ay toogteen, markii maydkeeda la baarayna laga helay waxyaabaha Qarxa iyo number sireed.
Saraakiisha Ciidamada dowladda degmada Baardheere ayaa sheegay inay wadaan baaritaanka haweenaydaan dibna ay ka faah faahin doonaan.
Ciidamada DF Somaliya
isku qarxin rabtay